Waa maxay EPA | Maaliyadda Dhaqaalaha
Weligaa ma maqashay EPA? Ma taqaan waxa ay tahay? Waa soo gaabinta Sahanka Dadweynaha Firfircoon, oo aad loo yaqaan, laakiin dad badani ma xasuustaan ​​inay ka qaybqaateen.
Haddii aad rabto inaad ogaato wax kasta oo ay ku jirto EPA, ujeeddada loo qabtay, sida ay u shaqayso iyo sida loo fahmo, markaa waxaan ku siinaynaa furayaasha aad sidaas ku samayso.
1 Waa maxay EPA
1.1 Fikradaha EPA ee Muhiimka ah
1.1.3 Shaqo la'aan
1.1.4 Waxqabad la'aan
2 Waa maxay ujeedada EPA
3 Sida loo faahfaahiyay
Sidii aan hore kuugu sheegnay, EPA waa soo gaabin Sahanka Dadweynaha ee Firfircoon. Waa daraasad tirakoob oo lagu soo ururiyo xogta suuqa shaqada iyo halka lagu xisaabinayo heerka shaqo la'aanta.
Si kale haddii aan u dhigno, waxaan ka hadleynaa dukumiinti dejineysa isbeddelka suuqa shaqada, oo kala soocaya dadka firfircoon (shaqaalaha) iyo kuwa aan firfircooneyn (shaqo la'aanta).
Haddii aadan ogeyn, EPA waxay jirtay ilaa 1964 ujeeddadiisuna waxay tahay in la ogaado xaaladda dadka, taas oo ah, haddii ay mashquul yihiin, firfircoon yihiin, shaqo la'aan yihiin ama aan firfircooneyn. Laakiin laguma sameeyo malaayiin reer Isbaanish ah, laakiin kaliya muunad u ah ilaa 65000 oo qoys rubuc kasta. Si kale haddii loo dhigo, 200000 oo qoys ayaa “la wareystaa” sanadkii.
Khubaro badan ayaa u qiimeeya sida "Tusaha ugu fiican ee lagu ogaanayo horumarka shaqada iyo shaqo la'aanta", In kasta oo qaar kale u maleeyaan in ay noqotay mid duugowday, marka lagu daro xaqiiqda ah in aysan suurtogal ahayn in la ogaado haddii xogtu dhab tahay, gaar ahaan marka laga hadlayo shaqada B ama xaaladaha uu qofku ka shaqeeyo laakiin aan rasmi ahayn (weli waa shaqo la'aan laakiin shaqeeya).
Fikradaha EPA ee Muhiimka ah
Si loo fahmo natiijooyinka ka soo baxa EPA, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo dhowr fikradood oo muhiim ah oo go'aamiya koox kasta oo qof walba ku jiro. Kuwani waa:
Waxay ku saabsan tahay dadka jira 16 ama ka weyn oo diyaar u ah shaqolaakiin weli shaqo ma aysan helin.
Hase yeeshee, waxay si firfircoon u raadinayaan shaqo ay ku galaan suuqa shaqada.
Waa dad, waliba 16 ama ka weyn, oo hadda shaqo haysta. Taasi waa, waxay wax ku biiriyaan suuqa shaqada iyaga oo shaqadooda ku beddela mushahar.
Dhanka kale, dadkani waxay u qaybsan yihiin shaqaale shaqeeya (kuwaas oo loo kala saaray kuwo dawladeed iyo kuwo gaar loo leeyahay), iyo kuwo iskood u shaqaysta (oo noqon lahaa kuwo iskood u shaqaysta, ganacsato aan shaqaale lahayn, shaqo-bixiye, iwm).
Kala soocid kale oo la tixgeliyo ayaa ah in qofku shaqeeyo waqti-buuxa ama waqti-dhiman.
Kooxdan waxaa ka mid noqon doona dadka 16 ama ka weyn oo hadda shaqo la'aan ah, ayaa la heli karaa oo si firfircoon shaqo u raadinaya.
Waa maxay sababta loogu tixgeliyo shaqo la'aan oo aanay firfircoonayn? Waa hagaag, maxaa yeelay waxay maraan mid ka mid ah xaaladaha soo socda:
Waxay tageen xafiiska shaqada dadweynaha si ay shaqo u helaan.
Waxay tageen xafiis shaqo oo gaar loo leeyahay iyagoo shaqo raadsanaya.
Waxay ku firfircoon yihiin soo gudbinta codsigooda shaqooyin suurtogal ah.
Waxay ka jawaabeen dhajinta shaqada.
Waxay ka qaybgaleen hababka xulashada shaqaalaha.
Waxay raadinayaan inay qabtaan.
Waxay haystaan ​​shaqo ay sugayaan inay ku biiraan.
Ugu dambayntii, dadka aan firfircoonayn waxaa EPA u tixgeliyaa inay yihiin dad jira 16 ama ka weyn oo aan ku jirin qaybaha kale.
Dhab ahaantii, waxay noqon lahaayeen dad aan shaqo haysan laakiin aan iyaguna raadinayn.
Waa maxay ujeedada EPA
Sida lagu aasaasay Sahanka Xoogga Shaqaalaha, ujeedooyinka ay dabagaleen EPA Waxay yihiin:
«Ogow dhaq -dhaqaaqa dhaqaale ee la xiriira qaybtiisa aadanaha. Waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo xog ku saabsan qaybaha ugu weyn ee dadweynaha ee la xiriira suuqa shaqada (shaqeeya, shaqo la ', firfircoon, aan firfircooneyn) iyo in la helo kala soocidda qaybahaas iyadoo loo eegayo sifooyin kala duwan. Waxay sidoo kale suurtogal ka dhigaysaa in la sameeyo natiijooyin taxane ah oo waqti isku mid ah. Ugu dambayn, maaddaama qeexitaannada iyo halbeegyada la adeegsaday ay la jaanqaadayaan kuwa ay dejiyeen hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha shaqada, waxay oggolaanaysaa in la barbardhigo xogta dalalka kale.
Natiijooyin faahfaahsan ayaa loo helay kooxda qaranka. Beelaha ismaamulada ah iyo gobollada, macluumaadka waxaa la siiyaa astaamaha ugu waaweyn oo leh heerka kala -soocidda ee ay oggolaatay isku -duwaha kala -duwanaanshaha qiyaasaha ”.
Si kale haddii loo dhigo, ujeeddadeedu waa in la ogaado kooxda dadweynaha ee firfircoon, shaqaysa, shaqo la'aanta ah iyo kuwa aan firfircoonayn.
Sida loo faahfaahiyay
Si loo fahmo sida EPA u shaqayso, waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa taas Shuruudaha soo socdaa waa kuwa lagu qeexay Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO). Sidaan hore kuugu sheegnay, waxaa la fuliyaa saddexdii biloodba mar koox dadweyne ah oo ka kooban 65000 oo qoys. Da'duhu waa inay u dhexeeyaan 16 iyo 74 sano. Dhammaan dadka da'daan waxay "ku qasban yihiin" inay iskaashadaan iyagoo bixinaya macluumaad sax ah.
Hadda, haddii dhammaan dadka qoyska ka tirsan ay diidaan wareysigaas koowaad, markaa kooxdaas qoyska waxaa lagu beddeli karaa mid kale. Laakiin haddii ay taasi dhacdo waraysigaas hore ka dib waxaa lagu adkayn doonaa inay ka jawaabaan waqti ka dib (saddexda meelood ee soo socda).
Taas micnaheedu ma aha in aan is diidi karno nafteena? Haa, mar walba wareysiga ugu horeeya iyo diidmada loo dhan yahay ee qoyska oo dhan. Dabcan, waa inaad buuxisaa su'aalo -diidmo.
Kuwa aqbala wareysiga waxay maraan sahanno taxane ah. Midda kowaad waxaa lagu fuliyaa qof ahaan iyo shaqsi ahaanba, waxaa fuliya wareysteyaasha INE (Machadka Qaranka ee Tirakoobka) halka kuwa kale lagu samayn karo qof ahaan ama taleefan).
Taas awgeed, qof walba waa la weydiistaa haysato usbuuca ka horreeya wareysiga sidii xilli tixraac.
Xogta ayaa had iyo jeer la shaaciyaa dhammaadka Oktoobar, Janaayo, Abriil iyo Luulyo, iyadoo la bixinayo xog faahfaahsan oo ku saabsan dadweynaha.
Sidaad arki karto, waxa EPA ay tahay mid sahlan in la fahmo. Dhab ahaantii, inta nolosheena oo dhan waxaa suurtogal ah in, mar uun, aad ogaatay in INE ay kuu dooratay inaad qayb ka noqoto Sahanka Xoogga Shaqaalaha, ma xasuusataa daqiiqaddaas? Su'aalo noocee ah ayay ku weydiiyeen? Miyaad mar kale la kaashaneysaa iyada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Shaqada » Waa maxay EPA